Mashruuc Biyo Balaadhinta Berbera Iyo Doorka Mareeyaha Wakaalada Biyihu ka qaatay | Mandheera News
Mashruuc Biyo Balaadhinta Berbera Iyo Doorka Mareeyaha Wakaalada Biyihu ka qaatay
June 22, 2019 - Written by mandheera news
Berbera(Mandheeranews)Wasaarada horumarinta Biyaha somaliland oo kaashaynaysa Haayada Care international ayaa manta Furtay mashruuca biyo balaadhinta Berbera gaar ahaana tijaabada biyaha ceelasha Kalajab.
Oo dhawaan laga hirgeliyey goobtan oo noqonaysa bogcada afraad ee ay biyuhu Berbera uga yimadaan.
Munaasibad lagu qabtay hotel maansoor Ee Berbera ayaa waxaa ka qaybgalay agaasimaha guud ee wasaarada horumarinta biyaha jsl iyo maamulka wakaalada Biyaha Berbera .
Mareeyaha wakaalada Biyaha Berbera Saleeban Cabdiraxmaan Looliye oo halkaasi ka hadlaya ayaa sheegya inay ku faraxsan yihiin biyo balaadhinta Berbera isagoo sidoo kale xusay inay Berbera ubaahan tahay biyo ku filan wakhtiga kulaylaha oo ay dadka biyaha xoog u isticmaalaan , sidoo kale mareeyuhu waxaa uu sheegay inay wakhtigan biyaha Berbera wanaagsan yihiin balse loo baahan yahay in lasii horumariyo .
Mareeyuhu waxaa ka sheegay munaasibadan inay Berbera korayso sidoo kale xoolaha ugu badani ay ka dhoofaan Dekeda Berbera sidoo kale dhirayn xoogani ka socoto gudaha Berbera sidaas awgeedna Berbera ay mar walba unugushay biyo la aanta sidaasi darteedna mar walba loo baahan yahay inay Berbera hesho Biyo Ku filan .
Mareeyuhu gabogabadii waxaa uu balanqaaday inay ku dadaalayaan inay magaaladu biyo ku filan hesho mustaqbalka dhow .
Mashruucan biyo balaadhinta Berbera ayaa noqonaya labo waji oo la xidhiidha isku xidhka ceelasha kala jab iyo biyijii hore ee Berbera iyo sidoo kale qaybinta biyaha Berbera .